NAFANA NY FANDRAISAN’NY VAHOAKA AN’ANTSIRABE NY KANDIDA DR ROBISON – MyDago.com aime Madagascar
Taorian’ny faritra Ambatondrazaka, Imerintsiatosika dia tanyamin’ny faritra Antsirabe iny indray no nanohizan’ny kandida Dr Robinson ny fihaonany tamin’ny vahoaka ny sabotsy 21 Okotobra teo. Feno hipoka tanteraka ny kianjan’ny Tsarasaotra izay nanatanterahana ny fihaonana. Nivantana tao amin’ny « Quartie general » ireo delegasiona mafonja izay tonga tany an-toerana,nahitana ny delegasiona avy amin’ny movansy Ravalomanana notarihan-dRamatoa Lalao Ravalomanana, Ireo Ct, Cst avy any amin’iny faritra Vakinankaratra iny , nahitana ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy, ny mpandrindra ny movansy Ravalomanana faritra Antananarivo sy ny manodidina ny Me Hanitra Razafimanantsoa, ireo delegasiona avy amin’ny antoko Avana notarihin’ny kandidà Dr Robison. Nohazavain’ireo tomponandraikitry ny « QG » ny mombamomba izany toy ny efitrano fivoriana, ny efitrano fikirakirana ny vaovao mahakasika ny kandidà. Rehefa avy eo moa dia nanao karnaval nihazo ny tsenan’ny Sabotsy ireo delegasiona ireo. Hafaliana no nandraisan’ireo olona izany, indrindra fa ny fahitana an-dRamatoa Lalao Ravalomanana. Tsy naharitra mihitsy ity farany ka nidina nandeha posy posy, nikopakopa-tànana ny olona teny amin’ny làlana izay nolalovany. Horakorako avy hatrany kosa no nandraisan’ny vahoaka marobe ny delegasiona tao amin’ny kianjan’ny Tsarasaotra.Nitorajofo tanteraka ny kianja tao an-toerana. Nisy ny fandraisam-pitenena nataon’ireo mpitarika tamin’izany.
Tsy handraraka ilom-by an-doha hoy izy ny vahoakan’ny Vakinankaratra raha hifidy ny kandidà atolotry ny movansy Ravalomanana ny Dr Robison. Manohana 100% azy ny movansy Ravalomanana. Marina hoy izy fa malaheloi iska tsy afaka nilatsaka I Dada sy Neny.Porofointsika fa ny Dr Robison no tohanantsika, ka 1eur tour dia vita. Vakinankaratra hoy Mamy no lohalaharana tamin’ny fifidianana ny filoha Ravalomanana. Manantena aho hoy izy amin’ity indray mitoraka ity fa tsy ambakan’ny hafa ny eto Antsirabe fa 1eur tour dia vita. Veloranom-bazimba ny antsika ka izay mamadika aloha kely ila. Natolotry ny antoko Avana ny Dr Robison hoy Mamy fa rehefa nifandresy lahatra tamin’ny filoha Ravalomanana dia nilaza izy fa io nokandidà tohanantsika. Faly miarahaba anao andriamato afiloha ary fantatray fa lanin’ny Malagasy ianao. Dokotera izy , hitsabo ny ferin’I Madagsikara, mijaly ny vahoaka ,mosary ny toe-karena ka dokotera izy mahavita azy.
Ny filoha Ravalomanana hoy izy dia natao ny fomba rehetar tsy hodiany eto, tamin’ny NI..NI.., Neny no natolotra ho kandidà rehefa tonga taty kanefa nosomparana ny anjara masoandroany ka nesorina tao anaty lisitra I Neny. Nalahelo hoy izy isika ary izahay milaza fa tsy anao fifidianana intsony. Rehefa noresen’ny filoha Ravalomanana lahatra isika dia izao no izy, vonona hanohana ny kandidà Robison. Hanohana azy isika hoy Me Hanitra ka izay no anjar andraikitra raisintsika.
Kandidà hosolombavam-bahoaka faritra Antsirabe
Hanolotra kandidà amin’ny fifidianana solombavam-bahoaka ny movansy Ravalomanana manerana ny Nosy. Efa nisy ireo nametraka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana tany amin’ny Ovec izay misy azy izy ireo. Ho an’ny faritra Antsirabe dia natolotra ho fantatry ny vahoaka tao amin’ny kianjan’ny Tsarasaotra ireo olona nilatsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka amin’ny 20 Desambra 2013 izao avy amin’iny faritra iny. Nahatratra sivy mirahalahy izy ireo amin’izany ka anisan’izany Andriamatoa isany Jean François Michel ao Antsirabe I, Rakotoamndimby, Randrianantenaina Olivier José ao Antsirabe II, Randriamampianina Ramilison sy Rasolonjanahary Sely Tiana ao amin’ny disitrikan’Antanifotsy, Rakotomandimbindrainibe Mamisoa ao Ambatolampy, Randrianjanaka Jean François ao Faratsijo, Rakotozandriny Philemon ao Mandoto, Rakotoarimanana Joelisoa ao Betafo.
Auteur Solo Razafy*Publié le 22 septembre 2013 Catégories Politique
Précédent Article précédent : NY FILOHA RAVALOMANANA : TSY NIVADIKA TAMIN’NY FIFANEKENA AHO ARY TSY HIVADIKA AMIN’IZANY
Suivant Article suivant : Kandida Dr Robison Jean Louis : Ny toky omeko anareo voalohany dia tsy maintsy mody ny filoha Ravalomanana